निषे’धाज्ञाले आँपको बजार प्रभा’वित हुँदा किसान समस्यामा ! – Yuwa Aawaj
जेठ २४, २०७८ सोमबार 192
काठमाडौं : निषेज्ञाले गर्दा आँपको बजार प्र’भावित हुँदा आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । सरकारले को’रोना महामा’रीको रोक’थाम तथा निय’न्त्रणका
लागि लगाएको निषेधा’ज्ञाका कारण आँप उत्पादक किसान तथा व्यवसायीलाई सहज रूपमा आँप बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या परेको छ । अहिले मालदह, कलकतिया, सिरीह, बम्बई, किसुनभोग, दशहरिलगायत जातका आँपको सिजन शुरू भइसकेको छ ।
तर, यसवर्ष आँपले अघिल्ला वर्षहरूमा झैं बजार पाउन सकेको छैन । यही कारणले गर्दा किसानहरूले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सिराहा कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्रमुख किसुन देव राउतले निषे’धाज्ञाका कारण आँपले राम्रो बजार पाउन नसकेको बताए ।
सामान्य अवस्थामा उत्पादक किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका आँप आफैले स्थानीय बजारसम्म लगेर विक्री गर्ने गथे ।
तर, जारी निषे’धाज्ञाका कारण स्थानीय हाट बजारहरू बन्द भएकाले त्यसरी बेच्न नसकिएको उनको गुनसो छ ।
फलफूल पसलहरू पनि बिहान बेलुका मात्र खुल्ने भएकाले आफ्नो उत्पादन सजिलै बेच्न सक्ने वातावरण नभएको उनले सुनाए । सिराहा र सप्तरी जिल्लामा मात्रै करीब १५ हजार ६ सय हेक्टर जमीनमा आँप खेती गरिन्छ । यो वर्ष अफ सिजन
भएकाले र असिना पानीका कारण उत्पादन पनि गतवर्षको तुलनामा घटेको सिराहा कृषि ज्ञानकेन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
गतवर्ष यी दुई जिल्लामा प्रतिहेक्टर १५ देखि २० मे’ट्रिकटन आँप फलेको थियो भने यसवर्ष उत्पादन घटेर प्रतिहे’क्टर साढे ५ मेट्रिक टन मात्रै फलेको छ ।
‘ उत्पादन घटेको छ भने अर्कातर्फ भएको उत्पादन पनि राम्ररी बजारमा बेच्न पाइएको छैन । त्यसैले आफूहरू समस्यामा परेको सिराहा र सप्तरी जिल्लाका किसानहरूले बताएका छन् । -आर्थिक अभियान दैनिकबाट
Posted in कृषि र अर्थ
Prevघले दम्पत्तिले नेपाललाई दिए तीन करोड रुपैयाँका स्वास्थ्य सामाग्री !
Nextदुबईका लागि उडेको जहाजमा जन्मदिन मनाएका एयर होस्टेजकाे खुशी धैरै दिन टिक्न सकेन !
बधाई ! रोहित चन्दले इन्डोनेसियामा आफ्नो टिमलाई दिलाए ठुलो उपाधी ।(भिडियो सहित)
भोलिबाट अनलाइनबाट मात्र पून- श्रम स्वीकृति पाईने, कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति बन्द !
प्रचण्ड भन्छन् : केपी ओली विदेशीको अगाडि सजिलै राम्रै ल’म्पसार पर्नसक्ने नेता हो ।
नेपालले भारतको विद्युत् ‘एक्सचेन्ज’ बजारमा प्रवेशको स्वीकृति पायो ।
३. असारदेखि के-के खुल्छ, के खुल्दैन ? यस्ताे छ सरकारकाे तयारी ! (2155)
७. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1090)